CABBAGE KALE (KEIL): WAXA AY TAHAY IYO WAXA AY YIHIIN HANTIDA FAA'IIDO LEH, TALOOYIN LOOGU TALAGALAY ABUURKA SII KORDHAYA, SHARAXAADDA NOOCYO, IYO SAWIRO KHUDRADDA CALEENTA CALEENTA RUUSHKA - BEER CAGAARAN
Kala soocidda miraha qudaarta - Kaabashka caleenta. Tilmaamo faahfaahsan iyo talooyin soo koraya
Waad dhif-tiri kartaa Kaabashka Kale ee xagaaga xagaaga ama goob beerta. Tiro yar ayaa og in marka lagu daro muuqaalka qurxinta iyo dhadhanka asalka ah, ay leedahay tiro badan oo ah guryaha hantida leh. Intaa waxaa dheer, noocaan oo aan qabyo ahayn, u adkeystaan ​​qabow iyo u baahan tahay dayactir yar.
Maqaalkeena waxaad ka akhrisan doontaa magacyo kale oo khudraddan ka mid ah, oo ay ka mid yihiin barashada Kale kaabajka, waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay tahay iyo waxa ay yihiin muuqaalada kala duwan, ka sokow waxaan ku soo bandhigi doonaa sawir noocyo kala duwan ee caleemaha caleen iyo sharaxaadkooda, iyo sidoo kale inaad akhriso sida loo abuuro warshad qudaar ah oo la yiraahdo Keil iyo sababta kaabashan waxaa lagu magacaabaa Ruush.
Sharaxaad dheeri ah
Warshadkan reer Crucifers ayaa leh magacyo badan: Brunkol, Gryunkol, Brauncol, Keil. Iyada oo ku xiran kala duwan, caleemaha foomka a rosette, si siman loo qaybiyo on jirida ama waxay ku yaalaan on taajka. Tuftku wuu sarreeyaa, wuxuu gaaraa in ka badan 1 m dhererka. Midabka caleemaha ka soo gadhay cagaarka kala duwan ee cagaaran iyo guduud.
Sidaa darteed, nooc ka mid ah kaabajka ayaa helay qaybteeda ugu horrayn sida dhirta ornamental. Caleenta caleen waa siman oo bubbly, caleemaha laftooda waa la gooyaa ama dusha sare ee geesaha, iyagoo ku xiran kala duwanaanta. Caleemaha caleenta waa la cunaa, dalagyada ayaa la goostay dhowr jeer xilli..
Noocani noocan oo kale ah ayaa si weyn loogu qaybiyaa Yurub iyo Maraykanka. Ma aysan dhicin waddan sax ah. Sida laga soo xigtay saynisyahanno, Kale waa noocyada ugu caansan ee kaabashka duurjoogta ah. In Russia, caan ah ee bannaanka u bilaabeen in ay soo iibsadaan inta badan dhawaan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya noocyada kale?
Kala saarista kaabajka Kale ee ka soo baxa caddaanka caadiga ah waxay si fudud u noqon kartaa caleemaha. Waxay noqdaan kuwo xajin, sida salad ah isla markiiba ka dib muuqaalka. Sidaa darteed, geedo of noocyada kuwan waa adag tahay in la isku khaldo. Intaa waxaa dheer, Kale waa mid ka duwan midabka midabkiisa, ma laha dermo daboolan. Muuqaalka ugu muhiimsan ee kaabajka ah waa in aysan sameysan madaxyo, iyada oo aan loo eegin noocyada kala duwan.
Muxuu yahay ujeedo ku habboon beerashada?
Kaabashka caleenta ayaa si aad ah loo adeegsaday karinta.. Salad, maraqyada ayaa laga sameeyaa, waxaa la kariyaa, caleenta qudaarta, xitaa chips ayaa la sameeyaa, oo sidoo kale baabba'ay cusub. Intaa waxaa dheer, beerista digo kaabash suurto gal ah quruxda qurxinta ee goobta.
caabbinta heerkulka heerkulka, kuleyl, qabow, dhaxan;
nuxurkiisa gaarka ah ee nafaqooyinka iyo fitamiinada;
ku haboon gobollada oo idil;
baahida loo qabo waraabin joogto ah;
Qalafsanaan aan fiicnayn;
wuxuu leeyahay khilaafka isticmaalka;
u baahan tahay quudinta;
Qaadada, dufanka iyo carbohydrateska
100 g oo ah kaabajka Kale waxaa ku jira 3.3 g oo ah borotiinka, taas oo ah kala badh qiyaasta maalintii jirka. Beddelka hilibka ee wanaagsan, oo si fiican u soo nuugay. Qodobka karbohidratka waa 8 g, dufanka ayaa ku jira qiyaasta kaliya 0.7 g. Sidoo kale fiyuusta cuntada ayaa lagu daraa qeybta, taas oo saameyn ku leh hawlaha habka dheef-shiidka.
Kale waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah. A iyo beta-carotene - oo aan lagama maarmaan u ah indhaha iyo aragtida, kooxda B - caawimaad dhiig la'aan, heerarka sonkorta dhiiga, C - waxay kicisaa nidaamka difaaca, iyo sidoo kale K iyo PP, taas oo ka saara sunta, ilaalinta maraakiibta iyo ka qayb qaadashada hababka dheef-shiid kiimikaadka.
Waxyaalaha Calcium ee Calais waxay ka sarraysaa caanaha, halka ay jirku si fiican u nuugo.. Intaa waxaa dheer, halabuurka waxaa ka mid ah:
Doorka muhiimka ah ee nidaamka qalfoofka waxaa lagu ciyaaraa potassium, magnesium, kaas oo taageera nidaamka dareemayaasha iyo muruqa wadnaha. Copper wuxuu ku jiraa tiro ku filan, kaas oo gacan ka geysanaya ilaalinta xoogga xididdada dhiigga iyo lafaha Muuqaal noocan ah waa maaddada omega - 3, taas oo qiimo u leh asiidh dufanka jirka ah.
Kaabashka Kale waxaa lagula taliyaa nafaqada sida mid ka mid ah alaabta dhirta gaarka ah si loo xasiliyo miisaanka.. Qiimaha kalooriga ee 100 g waa 50 kcal oo keliya.
Kala duwanaanta dhirta caleemaha caleen, redwood-guduud ah. Caleemaha waa cufan, furfuran. Gaaray 90 cm oo dherer ah. Caleemaha dambe ayaa si weyn u kora, taas oo keeneysa in goosashada inta badan xilliga xagaaga. Noocyada udubyada u adkaysta ee u adkaysta waxay ku dhacdaa -15ku saabsan C.
Waxaan ku talinaynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan sifooyinka kale ee kaabajka casiirka ee casriga ah:
Leaf Tuscany waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Tuscan Tuscan. Caleemaha waa muddo dheer, dheeraan, cagaar mugdi ah, bubbly, cufan iyo cufan. Dibadda ah oo la mid ah caleemaha kaabash Savoy. Noocyada qaboojiyaha u adkaysta waxay u adkeysan karaan dhibco ilaa -15ku saabsan C. Cunto sare.
Waxaan ku talinaynaa in la daawado video ah oo ku saabsan muuqaalada kaabajka noocyo Kale Tuscany:
Goobta khudradda cagaaran - Tintoretto waxay ku habboon tahay gobollada qaboobaha. Waxay u dulqaadaneysaa isbeddelka heerkulka, wax-soo-saarku wuxuu ka dhalan karaa +25 ilaa -16ku saabsan C. Caleenta kale ee cagaaran, aad u xajin, u eg xumbooyin. Wakhtiga Boosku waa dhexdhexaad.
Tilmaamaha talaabooyinka tallaabo tallaabo ah ee lagu beerto iyo daryeelka
Miro khudradda cagaaran ayaa si ballaaran loogu soo bandhigay dukaamo khaas ah, waaxyo, tafaariiqlayaal. Dukaamada online waxay bixiyaan fursad ay ku iibsadaan noocyo aan ahayn Ruush kaliya, laakiin sidoo kale xulashada ajnabiga si toos ah uga timi shirkadaha shisheeye. Kharashku wuxuu ku xiran yahay tirada bacaha ee xirmada iyo shirkadda, laga bilaabo 50 roon ee 6-10 gogo '.
Kaabashka Kale waxay ku koraan 70-90 maalmood, uma dulqaadanayo beerista, sidaa daraadeed way ka fiican tahay inay dhulka ku beerato. Tani waxaa la sameeyaa Abriil - Maajo, xilliga soo degidda waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada ee gobolka iyo heerkulka.
Meelo qorrax leh ama leh shoog yar. Goobta beerto waa inay noqotaa mid siman ama sare u kacda, meelaha hoose ee suurtogalka ah ee biyaha, waxay si xun u saameyn doontaa geedka. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo dalagyada dalagga iyo maaha warshad raajada, rutabagus iyo cruciferous hore u koray. Qodobbadu waxay ku habboon yihiin baradho, basasha, qajaarka.
Ciidda waa in aysan aheyn mid acidic ah. Goobta degitaanka waxay ka wanaagsan tahay diyaarinta xilliga dayrta.. Ujeedadaas awgeed, lime lakulmay, xiiraan, ash alwaax ah ayaa lagu daraa ciidda, humus waxaa lagu daraa. Guga ka hor inta laga beerto beereysid walxaha dabiiciga ah.
Geedka abuurista abuuray ceelasha. Masaafada u dhaxaysa waa in ay ahaataa 45 cm. At qoto dheer oo ah 1-2 cm ceelasha la dhigay ilaa 4 abuur. Waxay u baahan yihiin inay si fudud u saydhaa dhulka, ku shub oo dabooli filimka.
Ka dib 5 maalmood, marka caleemaha u muuqday, daboolin maqaashaha waa in laga saaro, iyo kaabash waa in la khafiifiyaa. Dhinac kasta waxaa jira hal kaliya oo ah firidda ugu xooggan.
Kaabashka yaryar ee dambe wuxuu u baahan yahay daryeelka soo socda:
Heerkulka. Waa lagama maarmaan in la abuuro abuurka marka hawadu kuleylayso ilaa +5 C, si kastaba ha ahaatee, Keil wuxuu u adkeysan karaa kulaylka iyo qabowga. Sidaa daraadeed, wakhtigu wuxuu ka duwan yahay gobol kasta. Waxay kala wareegtaa +35 ilaa -15ku saabsan C. Habka heerkulka ugu fiican ee laga helo +10 ilaa +20.ku saabsan Iyadoo
Waraabinta. Noocan ah Kaabashka u baahan yahay qoyaanka ciidda joogto ah. Waraabinta waa in marka hore ay ka hooseysa caleemaha, ka dibna galay grooves. Xilliga hawada kulul, waraabinta waa lagama maarmaan maalin kasta, halka aad u baahan tahay inaad hubiso in biyaha uusan istaagin. Caleemaha kulaylku waxay u baahan yihiin in la qoyo.
Dharka ugu sareeya. Talo si aad u quudiso Calais 6-8 usbuuc ka dib, sida goosashada. Bacriminta xad-dhaafka ah waxay sababi kartaa kallana caleen, sidaa daraadeed taasi badanaa maaha mid u qalma. Badanaa, mullein, qoryaha qoryaha, superphosphate iyo kuwa kale ayaa loo isticmaalaa.
Tallaabooyinka daryeelka caafimaad ee kale
Waxyaabaha lagama maarmaanka ah:
loosening - ka dib waraabiyo;
hilling - 10-kii maalmoodba mar;
saarista caleemo burbursan.
Caleemaha waa la wada baabbi'in karaa ka dib markii kaabajka koray in ka badan 20 cm oo dherer ah. Waxaad gooyn kartaa caleemaha shakhsiyaadka ama gebi ahaanba meesha ka saar. Tani waxaa la sameeyaa dhowr jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga. Caleemaha qorraxdu waxay noqdaan kuwo qadhaadh ah oo adag.
Noockan cusub ee kaabajka ah wuxuu ku jiri karaa qaboojiyaha ilaa todobaad. Biyo qoyan waxay ku habboon tahay kaydinta muddo dheer. Ilaa lix bilood ee qaboojiyaha Kale ayaa luminaya dhadhanka iyo sifooyinka faa'iidada leh.
Cabbiraadda, noocyada cayayaanka, kareemka cad, caleemaha cad iyo cawliga, iwm. Qiyaasta xakamaynta waxay noqon doontaa daaweyn fangeris la ogol yahay sida Topsin-M, Hom, iwm. Sidoo kale waxay waxyeeli kartaa slugs, weevils, kaabajka kaabajka, aphids iyo cayayaanka kale.
Wixii dagaal iyo ka hortagga waxay ka fiican tahay isticmaalka dawooyinka aan-kiimikada iyo daaweynta dadka.:
ku buufinta infusions of diirka basasha, dacadhada;
boodhka qoryaha iyo boodhka tubaakada iyo kuwa kale.
Guddi: Ka hortag wacan waa beeritaanka dhirta dhirta oo ka soo jiidata cayayaanka: caleen, marigold, saffron, iwm.
Koraaya noocan ah ee kaabajka ah waa in si taxadar leh ula socdaan xaaladda caleemaha. Waa la jarjaray oo la jarjaray si aanay u soo jiidin cayayaanka. Waa muhiim inaad ka fogaato abaar iyo qoyaan xad dhaaf ah. Tani, ciidda agagaarka waxaa laga yaabaa in mulched.
Kaabashka kalluunka ee kalluunku uma baahna daryeel adag, wuxuu ku kori karaa xaalad kasta oo cimilada ah, waana mid waxtar leh. Awood u leh in ay bixiyaan dhawr dalag xilli xili ilaa qabow. Isla mar ahaantaana, muuqaal qurux badan ayaa ka dhigi doonta qurxinta goobta.